संसारको भित्री समुद्रहरू | यात्रा समाचार
विश्वको भित्री समुद्रहरू
मोनिका सान्चेज | | सामान्य, हाम्रो बारेमा
पृथ्वी ग्रहमा बोर्निओ जंगल वा उष्णकटिबंधीय अमेरिकाको तटहरू जस्ता अविश्वसनीय प्राकृतिक परिदृश्य मात्रै होइन, तर यसमा पनि धेरै अन्तर्देशीय समुद्रहरू जहाँ धेरै किसिमका जनावरहरू बस्छन् र जहाँ यसको साथै यसको छेउछाउका शहरहरू देख्न तपाईं रमाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईं हामीलाई विश्वको केही अन्तर्देशीय समुद्री यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ? अहिलेको लागि, तपाईंले आफ्नो सामान तयार गर्नुपर्दैन, यद्यपि तपाईं पक्कै पनि तिनीहरूलाई डु site्गाबाट साइटमा हेर्न चाहानुहुन्छ।
1 भूमध्य सागर
2 एजियन सागर
3 मारमार समुद्री
4 मार नेग्रो
5 अरल सागर
6 जापानको सागर
7 Grau को समुद्र
8 क्यारिबियन सागर
9 ग्रीनल्याण्ड सागर
10 बउफोर्ट सागर
हेरौं हाम्रो यात्रा सुरु गरौं भूमध्य सागर यो »सानो» समुद्र अटलान्टिकको पानीले खुवाउँछ, जुन जिब्राल्टरको जलडमण्डलबाट भएर जान्छ। यो करिब २. million मिलियन किमी २ र 2,5, 2० किलोमिटर लामो छ। यो पछि क्यारेबियनबाट आएको हो। संसारको दोस्रो ठूलो अन्तर्देशीय समुद्र। यसको पानीले दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया र उत्तरी अफ्रिकालाई नुहाउँछ।
हामी हाम्रो यात्रा जारी राख्छौं एजियन सागर, जुन ग्रीस र टर्कीको बीचमा छ। यसको क्षेत्र करिब १ 180.000०,००० किलोमिटर छ, र उत्तरबाट दक्षिणमा 2०० किमि, र पूर्व देखि पश्चिम सम्म k०० किमि। यसमा तपाईं पाउनुहुनेछ टुर्की टापुहरू बोजकाडा र गोकसियाडा र ग्रीकहरू क्रेट वा कार्पाटोस। त्यो नाम एथेन्सका राजा एजियनको हो र उनी आफ्नो छोरा थेससलाई मिनोटाउरले खाएछ भनेर विश्वास गर्थे र आफूलाई समुद्रमा फालिदिए। एजियन जत्तिकै सुन्दर समुद्रको लागि दुःखको कहानी।
धेरै टाढा नगरीकन, हामी अब आएका छौं मारमार समुद्री, जुन एजियन सागर र कालो समुद्रको बीचमा अवस्थित छ, विशेष रूपमा जहाँ स्ट्रेट्स डार्डेनेल्स र बसफोरस अवस्थित छ। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, हामी तपाईंलाई भन्छौं कि यो सागर लम्बाई ११,11.350० किलोमिटरभन्दा कम छैन। समुद्री किनारमा यात्रा गर्दा हामी केहि टापुहरू जस्तै जान्न सक्छौं प्रिन्स टापु र मारमाराको टापु।
हराउन सकेन कालो समुन्द्र। दक्षिण पूर्वी यूरोप र एशिया माइनरको बीचमा अवस्थित छ, यो एजियन समुद्रको साथ पूर्वमा जोडिएको छ। यसको क्षेत्रफल 436.000 2,००० किलोमिटर छ र खण्ड 547.000 XNUMX,००० किलोमिटर छ। यस समुद्रमा बल्गेरिया, जर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की र युक्रेनका देशहरू छन्। विभिन्न संस्कृतिहरू, बिभिन्न परम्पराहरू, धेरै अविश्वसनीय ठाउँहरू हेर्न र रमाईलो गर्न 😉।
El अरल सागर यो विश्वको सब भन्दा ठूलो ताल हो जुन 68.000 2,००० किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो। अहिले यो व्यावहारिक रूपमा सुक्खा छ। यो एक विपत्ति हो जुन भर्खरको ईतिहासको सब भन्दा खराब मध्ये एकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। यसलाई हेर्नको लागि तपाईले मध्य एशियामा जानु पर्छ विशेष गरी काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तानका देशहरूमा।
यो समय तिर जानको लागि समय हो जापानको सागरआज ताइजी जस्ता समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा डल्फिनको परम्परागत शिकारको क्रूरताका कारण आज अत्यन्त विवादास्पद समुद्र मानिन्छ। यो पुरानो परम्परा, जुन आज पशु संरक्षणकर्ताहरूले खण्डन गर्छन, सेप्टेम्बर १ मा हरेक वर्ष मनाइन्छ, त्यस समयमा मारिएका डल्फिनको रगतले समुद्रलाई रातो दाग लगाएको छ।
Grau को समुद्र
अब हामी संसारको अर्को छेउमा जान्छौं, जान्नका लागि Grau को समुद्र, पेरू मा। ग्रु नाम हो जुन द्वारा प्रशान्त क्षेत्र को कि देशको तटीय क्षेत्रमा जान्छ। यो समुद्र बोका डे क्यापोनबाट कोनकोर्डिया तिर फैलिएको छ, त्यसैले यसले भन्दा कम केही पनि स्नान गर्दछ 3.079,० XNUMX, kilometers किलोमिटर तटहरू।
El क्यारिबियन सागर यो उष्णकटिबंधीय समुद्रहरू मध्ये एक हो जुन हामी संसारमा फेला पार्न सक्छौं। यो मध्य अमेरिकाको पूर्व र दक्षिण अमेरिकाको उत्तरमा अवस्थित छ। २,2.763.800,,2०० किलोमिटर क्षेत्रफल भएको पानी यसको पानीले क्युबा, कोस्टा रिका, बार्बाडोस वा पोर्टो रिको जस्ता धेरै देशहरूलाई नुहाउँछ। यदि तपाईं क्रिस्टलीय समुद्री किनार र हल्का मौसमको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, यहाँ पक्कै तपाईंसँग राम्रो समय हुनेछ।
यो एक थोरै (वा धेरै 🙂) चिसो जाने समय हो। हामी अगाडि बढ्छौं ग्रीनल्याण्ड सी, जुन उत्तर अटलान्टिक महासागरको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। यो ग्रीनल्याण्डको पूर्वी तट, स्वालबार्ड टापु, जन मायेन र आइसल्याण्डको टापुको बीचमा अवस्थित छ। यो लगभग १,२०1.205.000,००० किलोमिटर २ सम्मिलित छ। कम तापक्रमको बावजुद यहाँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ (-१० डिग्री सेन्टिग्रेड तल), तपाईं यसको पानीमा बस्ने धेरै जनावरहरू भेट्टाउनुहुनेछ, जस्तै डल्फिन, सिल, ह्वेल र समुद्री पक्षीs.
अर्को चिसो समुद्र, The बउफोर्ट सागर यो अलास्का र उत्तर पश्चिमी क्षेत्रहरू र युकोन बीचमा अवस्थित छ जुन पछि क्यानाडाको हो। यसको क्षेत्र 450.000०,००० किलोमिटर छ, र यसको नाम आयरिश हाइड्रोग्राफर सर फ्रान्सिस ब्यूफोर्ट (१2-१1774) लाई छ। यो जहाँ छ बैंकहरू टापुसर जोसेफ बैंक (१1768-१-1771-1819१), प्रकृतिविद्, वनस्पतिविद् र अन्वेषक जसले १ XNUMX१ in मा प्रतिष्ठित रोयल सोसाइटीको नेतृत्व गरेका थिए र जेम्स कुकको पहिलो यात्रामा उनका साथी थिए।
र यहाँ हाम्रो विशेष यात्रा समाप्त हुन्छ। कुन समुद्री तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्यो? र के कम?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » विश्वको भित्री समुद्रहरू
खैर उनीहरूले मलाई केवल or वा examples उदाहरणहरू दिए र यो पनि समाचार प्रदान गर्ने होइन र यति धेरै सूचनाहरू राम्रोसँग मलाई यो पृष्ठ मनपर्दैनथ्यो तर डलिथ कलर्डोमा म समुद्रको लागि अखबारको विज्ञापन खोज्दिनँ… ..निकोल
ब्रायन मेजिया भन्यो
के खराब पृष्ठ buuuuuuuuuu
ब्रायन मेजियालाई जवाफ दिनुहोस्
पिचोनलाई जवाफ दिनुहोस्
म कस्तो भयावह पृष्ठ पढ्दै थिएँ र म सुतिरहेकी थिएँ अजजाजज्जाजाजजाजज्जाज
टाढालाई जवाफ दिनुहोस्
क्यारिबियन सागर, प्रशान्त महासागर, अरब सागर, लाल सागर, क्यासपियन सागर, टिबर सागर, उनीहरू कस्ता प्रकारका समुद्रहरू हुन्?
लिडियालाई जवाफ दिनुहोस्
टेम्स टाउन, चीनको पुरानो इ England्ल्यान्डको एउटा टुक्रा
डेनमार्कमा नग्न तटहरू